We.com.mm - ဦးပိန်တံတားဘေးက အကြော်စုံတွေ အစားအသောက်တွေ ရတဲ့ ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး ထဲက “သဇင်နွယ်”
အစားတစ်လိုင်းသမားတွေဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း လင်းခန့်တို့ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘာဝါးရမလဲ ဘာစားရမလဲကိုပဲ တွေးနေတယ်။ ဘော်ဒါတွေနဲ့ ညဘက် Night-out ဒိုးမယ်ဆိုတိုင်း ဟိုဆိုင်သွားမယ်.. ဒီဆိုင်သွားမယ်.. စတင်ငြင်းခုန်ကြပြီ။ တစ်ခါတစ်လေ ဆုံးဖြတ်တာနဲ့တင် ဗိုက်က ဂူဂွမ်ဂူဂွမ်မိတဲ့ထိ ကြာတတ်တယ်။ အဲ့.. ဒီညတော့ Virus က (Virus = ဘော်ဒါတစ်ဦးနာမည်) “ဦးပိန်တံတား ဘေးနားကဟာတွေ မစားချင်ကြဘူးလား?” ဆိုပြီး ပြောတော့ အစက နောက်တယ်ပဲထင်နေတာ.. ဟာ! အစားတစ်လုပ်အတွက်နဲ့တော့ မန်းလေးထိ မသွားချင်ပါဘူးလေ၊ ဒါပေမယ့်လဲ လွမ်းတော့ လွမ်းမိသားရယ်။ လင်းခန့်တို့ ရွှေမန်းမြေဘက် မရောက်ဖြစ်တာကြာပြီလေ.. ဦးပိန်တံတားပေါ် လေတဖြူးဖြူးနဲ့ လမ်းအေးဆေးလေးလျှောက်ပြီး တံတားအောက်နားမှာ တောင်တမန်အင်းလေးကို အလွမ်းဖွဲ့ပြီး အကြော်လေးတွေနဲ့ ဘီယာသောက်ရတာလောက် ဖီးလ်ဂွတ်တာ ဘာရှိဦးမလဲ..။ ပြီးတော့မှ ဦးပိန်တံတားနားက “သဇင်နွယ်” ဆိုတဲ့ ဆိုင်က အတည်ကြီး ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ရှိနေတာတဲ့။ ဒါနဲ့ လင်းခန့်တို့ အုပ်စု ကန်တော်ကြီးဘက်ကို ဦးတည်ပါတော့တယ်။
မျှော်စင်ကျွန်းထဲရောက်သွားတော့ ဟိုး ကရဝိတ်ကြီးကို မြင်ရတဲ့ နေရာတစ်နေရာမှာ “သဇင်နွယ် - တောင်သမန်အင်း ဦးပိန်တံတားဆိုင်ခွဲ" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်လေးကို တွေ့တယ်။ နေရာလေးကိုတော့ မြင်မြင်ချင်း သဘောကျမိတယ်။ ကန်တော်ကြီးဘေး ကရဝိတ်မြင်ကွင်းမှာဆိုတော့ View က အလန်း။ ကန်ဘေးတစ်လျှောက် စားပွဲဝိုင်းတွေကို ဦးပိန်တံတားအောက်က စတိုင်အတိုင်းကို ကြိမ်ခုံလေးတွေ အခုံးလေးတွေနဲ့ ပြန်လည် အသက်သွင်းထားတာ။ ဦးပိန်တံတားကိုတောင် လွမ်းဆွတ်မိသွားတယ်။
ကံဆိုးချင်တော့ လင်းခန့်တို့အဖွဲ့ ကန်ဘေးတစ်လျှောက် View ကောင်းတဲ့နေရာတွေ တစ်ခုမှ မရဘူး။ လူတွေက အဲ့ဘက် အပြည့်ဖြစ်နေတာဆိုတော့။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့က ၇ယောက်တောင်ဆိုတော့ ၂ဝိုင်းဆက်ရမှာ။ လူများများနဲ့ ရှူခင်းမိုက်မိုက် နေရာလိုချင်ရင်တော့ နဲနဲစောစောလေး သွားကြည့်ပေးဖို့ အကြံပြုချင်တယ်။
ဒါနဲ့ပဲ အတွင်းပိုင်းအခြမ်းမှာ ၂ဝိုင်းဆက်ပြီး ထိုင်လိုက်တယ်။ ထိုင်ထိုင်ချင်းဆိုသလို ထုံးစံအတိုင်း ဒီအဖွဲ့က ၇ရက်တိတိ အစာငတ်နေတဲ့အတိုင်း တစ်ခုပြီး တစ်ခုမှာတာ ဆိုတာ.. စားပွဲထိုးမလေး လက်မလည်တဲ့အထိပဲ။ တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ပေါ့။ ဒီနေ့ သဘောမကျမိတာလေးတစ်ခုက မှာတာတွေထဲမှာ မရတာတွေ နဲနဲများနေတယ်။ ငတ်နေတဲ့အချိန် ဆိုင်မှာ မှာလို့ အဲ့လို ဟိုဟာမရ ဒီဟာမရ ဂရက်ထတာလောက် စိတ်ပေါက်တာ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့်လဲ မရှိရှိတာကို ရှာကြံပြီး တန်းစီ မှာချလိုက်တယ်လေ။ တော်သေးတာပေါ့။ တကယ့် နာမည်ကြီး အကြော်တွေ အကုန်ရပေသေးလို့။ မဟုတ်လို့က ထပြန်မိမှာ ကျိန်းသေတယ်။
အရင်ဆုံးလာချတာ.. ဆိတ်သားထောင်း.. WOW!! Amazing! တကယ်ပါ။ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်၊ အာပူလျှာပူဖြစ်အောင် အမိုက်စား ထောင်းထားပေးတာ။ မှာကထဲက “အစပ်လျော့မလား?” ဆိုကထဲက နိုးဆိုပြီး ငြင်းမိခဲ့တာ နောင်တ လုံးဝမရဘူး။ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ရှမ်းနံနံ၊ ပင်စိမ်းရွက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း နဲ့ ဂျင်းကို အချိုးကျကျ ထောင်းထားတာ.. အရသာသိပ်ရှိ။ ခုနက ဟိုဟာမရ ဒီဟာမရ ဖြစ်နေလို့ စိတ်မကြည်ခဲ့တာတွေ အကုန် ဆိတ်သားထောင်းကြောင့် အရည်ပျော်သွားတယ်။
ဘူးသီး + ပြောင်းဖူး + ပုစွန်
ကျွပ်ကျွပ်ရွရွနဲ့ ပူပူနွေးနွေးလေး.. ကိုက်လိုက်ရင် ကဂျွတ်ကဂျွတ်နဲ့ မွမွလေး ဘီယာလေးသောက်လိုက်၊ အကြော်လေးဆွဲလိုက်နဲ့။ နတ်ပြည် ၁၆ထပ်ကို ရောက်သွားသလိုပါ။ အကြိုက်ဆုံးက ဘူးသီးကြော်! သဇင်နွယ်က ဗူးသီးကို အာလူးချောင်းစတိုင် လှီးပြီး ခပ်ပါးပါး ကြော်ပေးထားတာ ပိုစားလို့ကောင်းစေတယ်။
ငါးသလဲထိုးတွေကို မွမွရွရွလေး ကျော်ထားပေးတာ။ ချချချင်း ချက်ချင်းကို လင်းခန့်တို့အဖွဲ့ လက်စွမ်းပြတာ တစ်ပန်းကန်လုံး ပြောင်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ “ညီမလေးရေ... လာပါဦး... ဒီငါးသေးကြော် နောက်ထပ်တစ်ပွဲ! ပြီးတော့ အကြော်.. ပြီး.. ဆိတ်သားထောင်း.. မြန်မြန်လေး” ဆိုပြီး စားပြီးသား ၃ခုကို နောက် တစ် round ထပ်မှာချလိုက်မိတယ်။
ဒီတစ်ခုကိုတော့ ကျနော် လုံးဝမကြိုက်ပါ။ သွားစားရင်လည်း မှာစားဖို့ recommand မလုပ်ပါဘူး။ လာချကထဲက ပျော့ပြဲနေတာ စားလို့ လုံးဝမကောင်းပါ။ ကြော်သုပ်ဆိုတာ ကျွပ်ရွနေတဲ့ ချက်ချင်းကြော်ထားတဲ့ အကြော်တွေကို ခပ်ဖွဖွလေးသုပ်ပြီး ခပ်မြန်မြန်လေး လာချပေးရမှာ။ အခုဟာက အေးစက်ပြီး ပျော့နေတယ်။ လင်းခန့်တို့ အုပ်စု အဲ့ ၂ပွဲကို သိပ်မထိဘူး။ ပြန်ခါနီးထိ အများကြီး ပိုနေတယ်။
ထမင်းဆီဆမ်း + ငါးဖယ်ကြော်!
Wow! ဒါလေးကလည်း သိပ်ကောင်းတယ်။ ထမင်းဆီဆမ်းကို သုံးထားတဲ့ ဆန်က ချက်ထားတာ အနေတော်ပဲ။ ဆီနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ထမင်းပူပူလေးကို ငါးဖယ်ကြော်နဲ့စားတာ သိပ်လိုက်ဖက်တယ်။ အကြော်တွေ၊ ဆိတ်သားထောင်းတွေနဲ့လည်း အရမ်းတွဲဖက်ညီတယ်။ ကြိုက်လွန်းလို့ လင်းခန့်တို့ အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက် တစ်ကိုယ်ထဲ ၃ပွဲတိတိ ဝိုက်ခဲ့သေးတယ်။ ?
ငါးဖယ်လုံး.. ကြွက်နားရွက်.. ငရုတ်သီးစိမ်း.. ငရုတ်သီးပွ.. မှိူနဲ့ ကျောက်ပွင့်တွေကို သံပုရာနံ့မွှေးမွှေးနဲ့ အရည်သောက် ချက်ထားတာ မဆိုးဘူး။ သောက်လို့ကောင်းတယ်။
သရက်သီး.. ခါကြက်ဥ.. ဖျော်ရည်
ဒါကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ ဘီယာနဲ့က ပိုလိုက်ဖက်ပါတယ်။ ?
ဒါတွေကတော့ မှာတုန်းက မီနူးတွေပါ။ လင်းခန့်တို့ weFood ပရိသတ်တွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တယ်။
ဒီပုံတွေကတော့ ပြန်ခါနီး ဆိုင်နောက်က ဟင်းချက်တဲ့နေရာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှူ ရှိမရှိ သိချင်တာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တောင်းပြီး ရိုက်လာတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။
ဒါနဲ့ အဲ့ဒါဆိတ်သားထောင်းတဲ့ အမကြီးတဲ့။ အမရေ ဆိတ်သားထောင်းက ဂွတ်ရှယ်ပဲလို့ ပြောခဲ့သေးတယ်။
ဒါကတော့ လင်းခန့်တို့ ၇ယောက် အဖွဲ့ ရှင်းခဲ့ရတဲ့ Bill ပါ။ ၆သောင်းလောက် ကျပါတယ်။ ဘီယာ ဒီထဲမှာ မပါဘူး။ ဘီယာက သူတို့ဆိုင်မှာ မရှိဘူးတဲ့ အပြင်က သွားမှာပေးရတာ ဆိုလို့ပါ။ ဘီယာကတော့ ၂သောင်း။ ပေါင်း ၈သောင်း ဆိုတော့ တစ်ယောက် ၁သောင်းကျော်လောက် ကျတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဈေးလေးက မဆိုးဘူးပေါ့နော်။ အဆင်ပြေပါတယ်။ မီနူးထဲက ဟာတွေ အစုံ မရှိတာလေး တစ်ခုပဲ အားမရဘူး။ ကျန်တာတွေ ဂွတ်!
ဒါကတော့ ပြန်ခါနီး လှမ်းရိုက်လိုက်တဲ့ View!
ကဲ.. လင်းခန့်တို့ “သဇင်နွယ် - တောင်သမန်အင်း ဦးပိတ်တံတား ဆိုင်ခွဲ”ကို ချံငုံပြီး အမှတ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့..
1. အစားအသောက် >> **** (ဂွတ်ဂွတ် -4stars out of 5)
2. မှာယူစောင့်ဆိုင်းချိန် >> *** (မဆိုး -3stars out of 5)
3. နေရာအခင်းအကျင်း >> ***** (ဂွတ်ဂွတ် -4stars out of 5)
4. သန့်ရှင်းသပ်ရပ်မှူ >> *** (မဆိုး -3stars out of 5)
5. ဝန်ထမ်း ဝန်ဆောင်မှူ >> *** (မဆိုး -3stars out of 5)
6. ဈေးနှူန်း >> *** (မဆိုး -3stars out of 5)
7. ကားပါကင် >> **** (ဂွတ်ဂွတ် -4stars out of 5)
Good Food.. Good Life!